Yeka ukubiza abathengisi ngamavila! | Martech Zone
Lwesine, Matshi 17, 2011 Lwesine, Okthobha 27, 2011 Douglas Karr
Kule veki, ndifunde enye iposti apho abathengisi babebizwa ngokuba "ngamavila". Ihlala ibonakala ngathi yenye yeentengiso ezingezona ezentengiso ezitsala "ubuvila" kwaye ekugqibeleni zifike kum. Umntu ohambisa i-imeyile ongazange alawule iphulo elibiza umthengi wakhe ukuba livila. Intengiso yentengiso eshukumayo ethetha malunga nabaxhasi babo abangasebenzisi sicelo sabo kuba bonqena. Indoda yemidiya yoluntu ethetha ngabathengisi abangabeki esweni okanye abaphenduliyo xa kuthethwe nge-Intanethi… bonqena.
Ke… ixesha lesinye seerandi zam.
Ukuba yi-blogger, isithethi, okanye into ebizwa ngokuba "yingcali" -ingcali yemicimbi-kulula. Sifanele sihambahamba kwaye sikhombe wonke umntu ngeminwe kwaye sibaxelele into abayenzayo engalunganga. Ngumsebenzi olula… kwaye nomsebenzi endiwuthanda ngokwenene. Ukuba uluqonda kakuhle olu shishino, unokunceda iinkampani ezininzi ngaphandle kokumba nzulu kakhulu. Kodwa kuhlala kulula ukuxelela abantu into abayenzayo engalunganga xa ungenalo uxanduva lokwenza kunye noxanduva lokuphendula ukufumana iziphumo.
Ukuba ngumqeshwa akukho lula. Ukuba ngumrhwebi kunzima nangakumbi. Ngelixa imisebenzi emininzi ibilula ngokwethu kule minyaka idlulileyo, songeze amaxabiso angenantlonelo amajelo kunye nabalamli kwiipleyiti zabathengisi bethu. Ngelinye ixesha, ukuba ngumthengisi kuthetha nje ukuvavanya intengiso okanye ezimbini kumabonwakude, unomathotholo okanye kwiphephandaba.
Asisayi… sinama-mediums angenakubalwa kumajelo eendaba ezentlalo kuphela - ungaze ucinge ngokuthengisa ngokwesiko kunye nakwi-Intanethi. Heck, sineSIBHOZO iindlela zokuthengisa kwiselfowuni kuphela… i-SMS, i-MMS, i-IVR, i-imeyile, isiqulatho, iNtengiso eshukumayo, iiNkqubo zeMfono kunye neBlux
Kwangelo xesha linye siye sanda ngokwandayo kwinani labalamli, iindlela zokubeka iliso nokuzihlalutya, kunye neendlela zokwenza ngcono nokuphucula nganye… kunye nokufumana enye indlela yokondla enye, besinciphisa izixhobo ngaphakathi ezazisetyenziswa ngabathengisi ngaphambili.
Namhlanje, bendisemnxebeni kunye nenkampani yamanye amazwe enezixhobo ezineewebhusayithi ezine ezahlukeneyo kumazwe amane ahlukeneyo kunye neqela eli-4… yena. Kulindeleke ukuba aqhubeke nokwandisa indawo nganye kwingingqi kunye nokukhulisa ukuthengisa ngaphakathi - ngaphandle kohlahlo-lwabiwo mali ngaphandle kwe Inkqubo yolawulo lomxholo enjini yokukhangela efanelekileyo.
Iingcali zezifundo azinazo iintlanganiso, ezopolitiko eofisini, uphononongo, iingxaki zohlahlo-lwabiwo mali, ukunqongophala kwetekhnoloji, ukunqongophala kwezixhobo, iziseko zolawulo, ukunqongophala koqeqesho lwezixhobo, kunye neshedyuli yokuthintela inkqubela phambili yabo njengomthengisi. Ngexesha elizayo xa uthatha isigqibo sokubiza umthengisi ukuba uyonqena, thatha imizuzu embalwa kwaye uhlalutye imeko-bume yabo… ungakufezekisa oko banako?
Ndisebenza neenkampani ezithile apho kufuna iinyanga zokucwangcisa ukwenza ulungiso oluncinci kumxholo wewebhusayithi… iinyanga! Kwaye ifuna iintlanganiso ezingenakubalwa kunye namanqanaba abaphathi abangafundanga abafuna ukuvavanya nokwamkela inkqubo. Yintoni abanye abathengisi abakwaziyo ukuyikhupha ayisiyiyo imimangaliso kule mihla inikwe imiceli mngeni kunye nezixhobo.
Mar 17, 2011 ngo 11:31 PM
Mar 22, 2011 ngo 12:27 PM